Meelaha Kale ee Desktop-ka ah oo aan taageerin DEBIAN 10 | Laga soo bilaabo Linux
Meelaha Kale ee Desktop-ka ah oo aysan taageerin DEBIAN 10
Linux Post Ku Rakib | | GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Meelaha Kale ee Desktop-ka ah oo aan si rasmi ah u taageerin DEBIAN 10
Sidaan wada ognahay, DEBIAN 10 qaybinta meta, waa mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn, adag oo xasilloon ee wadarta iyo hadda Nidaamyada hawlgalka oo bilaash ah oo furan jira, oo asal ahaan waxay taageertaa kuwa ugu caansan uguna faahfaahsan Deegaanka Desktop (DE) yaqaan.
Aynu xusuusano in a Deegaanka Desktop, waa wax aan ka badnayn set-ka softiweer ee lagama maarmaanka u ah in la siiyo isticmaale kasta oo cayiman Nidaamka hawlgalka, qaab muuqaal, saaxiibtinimo iyo raaxo leh oo isdhexgal ah. Taasi waa, waa hirgelinta Isdhexgalka Isticmaalaha Sawirka (GUI) diyaar u ah inay bixiso helitaan fudud iyo qaabeyn, sida baararka qalabka iyo isdhexgalka ka dhexeeya barnaamijyada, oo leh hawlo shaqo sida jiidis iyo dhibic, iyo kuwo kale oo badan.
Xaalada hada jirta DEBIAN GNU / metadistribution Linux, ee ugu dambeeyay version, ka lambarka 10, magaca summada Buster, waxay si rasmi ah u taageertaa rakibida iyo adeegsiga waxyaabaha soo socda Degaanada Desktop: GNOME, KDE Plasma, XFCE, Qoraxda, MATE, Lxde y LXQT.
Sida si cad loogu muujiyey, sawirka isla markiiba kor ku xusan cutubkan, adoo adeegsanaya arjiga Tasksel (Xuliyaha Hawsha ama Xuliyaha Hawsha). Taas oo ah wax aan ka badnayn xirmo siinaya interface fudud oo loogu talagalay dadka isticmaala ee doonaya inay habeeyaan nidaamkooda iyagoo fulinaya hal ama in ka badan hawlo gaar ah. Barnaamijkan waxaa loo isticmaali karaa inta lagu guda jiro habka rakibaadda ama wakhti kasta, adoo adeegsanaya ama aan isticmaalin, cabirrada bilowga qaarkood.
1 Meelaha Kale ee Desktop-ka ah
1.1 Desktop Deepin
Meelaha Kale ee Desktop-ka ah
Waxaa ka mid ah Meelaha Kale ee Desktop-ka ah aan si rasmi ah u taageerin DEBIYAAN 10, taas oo ah, aan lagu maamulin asal ahaan Tasksel, waxaan ka xusi karnaa waxyaabaha soo socda:
Deegaanka Deepin Desktop ama DDE waa a Deegaanka Desktop loo abuuray inuu ahaado mid asal ahaan ama asal ahaan ka soo jeeda quruxda, hal abuurka iyo shaqeynta Shiinaha ee loo yaqaan 'Distro' Dheeraad. Tan waxaa markii hore lagu soo saaray maktabadda GTK, taas oo loo oggol yahay inay bixiso waxqabadyo ah Qolofta Gnome ku saabsan. Kadibna waxaan ku darayaa maktabadda Qt5 halkii laga bixin lahaa HTML5.
Oo hadda, waxaa dib loo qoray by DTK (Qalabka Qalabka Deepin) loogu talagalay naqshadeynta isdhexgalka iyo isdhexgalka Nidaamka, guud ahaan. Dheeraad ah, DDE waxaa ka mid ah xarun qaabeynta oo mideysa nidaamyada nidaamka, muuqaalka, cusbooneysiinta, iyo xulashooyinka loogu talagalay GRUB nidaamka gaarka ah. Waxaa la filayaa in lagu dhejin karo DEBIYAAN 10, markii nooca la sii daayay Deepin 20, taas oo ku saleysnaan doonta tan. Si aad wax badan uga ogaato ayuu yidhi Deegaanka Desktop waxaad booqan kartaa boggooda rasmiga ah: DDE.
Pantheon waa a Deegaanka Desktop loo abuuray inuu ahaado mid dhalasho ama asal ah soonka, Waqooyiga Ameerika oo bilaash ah oo ammaan ah oo loo yaqaan Distro, Dugsiga Hoose. Tan waxaa lagu gartaa inay tahay mid fudud oo qaybsan, marka lagu daro in laga soo qoro xoq inta badan luuqadda Vala iyo leh iyo qalab GTK3.
Waxay ku saleysan tahay GNOME laakiin waxay isticmaashaa qolofkeeda taas oo ka dhigaysa mid ka fudud kana yaraanaysa tan isla markaana si fudud ula qabsanaysa barnaamijyada kale ee softiweerka ah. Dugsiga Hoose sida Qorshe (dekedda), jannayo (shabakadda internetka), Xoqo (Tifatiraha qoraalka fudud) ama Birdie (Macmiilka Twitter-ka). Sidoo kale, u isticmaal maareeyaha daaqadda Gala, taas oo ku saleysan Mutter.
Waxaa la filayaa in lagu rakibayo DEBIYAAN 10, hab deggan, ka nooca ay hadda 5.X (Juno), la jaan qaadaya DEBIYAAN 10, tan iyo kii hore 4.X (Loki) ayaa si xasilan loogu rakibay DEBIYAAN 9. Si aad wax badan uga ogaato ayuu yidhi Deegaanka Desktop waxaad booqan kartaa boggooda rasmiga ah: Pantheon.
Budgie Desktop waa a Deegaanka Desktop loo abuuray dhalasho ahaan ama asal ahaan fudud, madax-bannaan oo si fudud loo isticmaali karo, Irish distro wac, Solus. Intaa waxaa dheer, waxaa lagu gartaa ahaansho casri ah, adag, dhakhso leh, dheecaan leh lana beddeli karo.
Marka hore, muuqaalkiisu aad buu ugu ekaa GNOME 2 iyo / ama MATE, inkasta oo ay dhexgeli karto xubno ka mid ah Sigaar y Qoraxda. Sababtoo ah, way ku dhisan tahay Gnome 3 laakiin adoo adeegsanaya tilmaamaha qaarkood Gnome 2. Maanta, waxaa lagu soo koobay faahfaahin waxayna leedahay taageero tiknoolajiyaddii ugu dambeysay.
Waqtigan xaadirka ah, muuqaalkeeda nooca ugu dambeeyay ee Solus xusuusinayaa interface ee Windows 10. Iskusoo wada duuboo, marka la eego baarka hoose iyo aagga ogeysiinta. Tilmaan in dadka isticmaala qaarkood Windows inay bilaabaan inay wadaan GNU / Linux, waxay si weyn u qiimeyn karaan.
3da, Degaanada Desktop faallooday, tani waa tan ugu fudud ee lagu rakibi karo DEBIYAAN 10, tan iyo markii ay baakado (budgie-desktop, budgie- *) waxay ku jiraan keydadkii ugu dambeeyay ee isla. Si aad wax badan uga ogaato ayuu yidhi Deegaanka Desktop waxaad booqan kartaa boggooda rasmiga ah: Budgie.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Entornos de Escritorios» beddelaadyo aan si rasmi ah u taageerin «DEBIAN 10», qaar ka mid ah la hirgelin karo waqtigan qaarna aan la fulin karin, laakiin taas oo sida ugu dhaqsiyaha badan dhaqso u noqon doonta, ayaa dan weyn iyo faa'iido u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Meelaha Kale ee Desktop-ka ah oo aysan taageerin DEBIAN 10
Alexander Garcia dijo
Saaxiib, waa inaad sheegtaa Trinity oo ah nooc wax laga beddelay oo ah kde3 oo leh qt3 oo horeyba u qaadaysa tillaabooyinka inay noqdaan bey'ad Desktop ah oo gebi ahaanba ka madax bannaan kde oo leh barnaamijyadeeda u gaarka ah.
Jawaab Alejandro Garcia
Salaan Alejandro! Ma aanan aqoon isaga, ugu dhakhsaha badan waxaan rajeynayaa inaan qoro maqaal isaga ku saabsan. Waad ku mahadsantahay faallooyinka iyo macluumaadka.
AMPPS: Jawiga Horumarinta Websaydhka Softaculous ee GNU / Linux
DOSBox: Sidee loo adeegsadaa luqadaha barnaamijka DOS ee GNU / Linux?